Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Asa fitoriana famonjena an'i Lufthansa ho an'i Afghanistan ankehitriny
Vaovao Mafana Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Lufthansa dia nandositra mpitsoa-ponenana Afghan 1,500 mahery soa aman-tsara tany Alemana
Lufthansa dia hanohy hiasa sidina fanampiny avy any Tashkent afaka andro vitsivitsy miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Office Foreign Foreign Office.
Hatramin'ny herinandro iray dia olona maherin'ny 1,500 no nalefa tany Alemana avy any Tashkent tamin'ny sidina roa ambin'ny folo.
Ny ekipan'ny fikarakarana Lufthansa dia mijery ireo mitady fiarovana aorian'ny fahatongavany.
Sidina bebe kokoa kasaina amin'ny andro ho avy.
Nandritra ny herinandro lasa izay, i Lufthansa dia nanangana fiaramanidina hanidina ireo mpitsoa-ponenana avy amin'ny fanjakana Azia Afovoany mankany Alemana. Fiaramanidina lavitra Airbus 340 no ampiasaina isaky ny tranga. Hatreto, ny sidina isan'andro dia nitondra olona mihoatra ny 1,500 ho any Frankfurt.
Rehefa tonga tany Frankfurt dia nisy ekipa mpanohana an'i Lufthansa manampy ireo tonga vaovao miaraka amin'ny sakafo, zava-pisotro sy fitafiana ary manome fikarakarana ara-pitsaboana sy ara-tsaina voalohany. Ho an'ireo ankizy marobe izay tonga eto Frankfurt ankehitriny, dia natsangana ny zoro kilalao sy sary hosodoko ary kilalao no natolotra.
Lufthansa dia nifaneken'ny governemanta alemanina hanampy amin'ny famindra ireo mpitsoa-ponenana Afgana miaraka amin'ny fiaramanidina Airbus A340 miorina aminy. Ny fiaramanidin'ny alemà mitondra ny saina dia tsy manidina any Afghanistan fa manangona ireo olona nesorin'ny Bundeswehr (tafika alemana) tany Doha, Qatar ary Tashkent, Uzbekistan.